Banyere Anyị - China Construction Machinery Import & Export Co., Ltd.
China Construction Machinery Import & Export Co., Ltd. bụ otu n'ime China na -eduga ekspootu n'ọdụ ụgbọ mmiri ígwè, emi odude ke Xuzhou City. Kemgbe e guzobere ụlọ ọrụ ahụ na 2011, anyị na -elekwasị anya n'ahịa igwe n'ọdụ ụgbọ mmiri. Na 2012, anyị rụkọrọ ọrụ na XCMG iji zụlite nke ọma ccmie ika n'akụkụ loader kreenu. Mgbe ndị injinia na -aga n'ihu na ihe ọhụrụ na teknụzụ na -aga n'ihu, ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile na -eto ngwaahịa a, a na -ebutekwa ọnọdụ ahịa ya na China mbụ.
N'otu oge ahụ, anyị bụkwa ndị nnọchi anya ikike nke stacker na onye na -ahụ maka akpa ZPMC, onye nrụpụta akụrụngwa na akụrụngwa n'ọdụ ụgbọ mmiri kachasị n'ụwa.
Ọ bụghị naanị na anyị na -eme ka ndị ahịa mba ofesi ghọta ma mata ngwaahịa anyị, kamakwa jiri nwayọọ nwayọọ guzobe ọbụbụenyi na ndị ahịa n'ọdụ ụgbọ mmiri n'ụwa niile.
Na ọtụtụ afọ nke ahụmịhe bara ụba, anyị enwetala ihe ọmụma ọkachamara dị mkpa yana ahụmịhe dị mma n'ọhịa nke ọdụ ụgbọ mmiri. Mgbe ọtụtụ afọ nke ịrụsi ọrụ ike, taa anyị ka nọ n'etiti ọtụtụ ndị asọmpi gburugburu ụwa. Sistemụ ejikọtara nke ọma, sistemụ ejikwa nke ọma na otu ndị otu azụmaahịa mba ofesi na-enyere anyị aka ịtụgharị iwu ka ọ bụrụ ngwaahịa ikpeazụ wee bupụ ya n'ihe dị ka mba na mpaghara 60 gburugburu ụwa.
Shanghai Zhenhua Heavy Industry (Group) Co., Ltd. (ZPMC) bụ ụlọ ọrụ ama ama na ụlọ ọrụ nrụpụta akụrụngwa dị arọ. Ọ bụ ụlọ ọrụ nwe obodo nwere ụlọ ọrụ edepụtara A na B. Ndị na -achịkwa bụ China Communications Construction Co., Ltd., otu n'ime ụlọ ọrụ 500 kacha elu n'ụwa. Onye isi ụlọ ọrụ ahụ bụ Gongmao Shipyard, nke hiwere na 1885. Mgbe ihe karịrị otu narị afọ nke mmepe gasịrị, ahaziri ya aha ọzọ Zhenhua Heavy Industry na 2009. Ụlọ ọrụ ahụ hiwere isi na Shanghai, ma nwee ntọala mmepụta 10 na Shanghai, Nantong na ndị ọzọ. Ebe, na-ekpuchi mkpokọta 10,000 mu, yana oke osimiri dị kilomita iri, nke oke osimiri miri emi dị kilomita ise na ọdụ ụgbọ mmiri na-ebu ibu 3..7 kilomita. Ọ bụ mba na ụwa kacha emepụta ngwa ọrụ dị arọ maka igwe n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ụgbọ mmiri ụgbọ njem zuru oke nke 25 60,000 ruo 100,000, nke nwere ike ibuga nnukwu ngwaahịa n'ofe oke osimiri na ụwa.
Industrylọ ọrụ Shanghai Port Machinery Heavy Industry na -etolite stackers kemgbe 2010
A na -eziga mbupụ akụkụ n'akụkụ Oceania A zigara ngwaahịa crane n'akụkụ ụlọ ọrụ ahụ nke ọma na saịtị ọrụ onye ọrụ na Papua New Guinea na Oceania. Companylọ ọrụ ahụ mepụtara na Septemba 2013 dabere na mgbaze dị omimi na nnabata nke teknụzụ dị elu nke ịkwalite akụkụ n'ụlọ na mba ofesi. Ụgbọ ala ahụ bụ ngwongwo n'akụkụ na-ebufe ma na-ebugharị ọkara ihe na-adọkpụ, nke nwere ọkara ihe na-adọkpụ 371HP na akụkụ akpa MQH37A na-eburu ma na-ebutu crane. Ọ dabara maka ịwụnye ma na-ebutu ihe na-ebuli ihe maka igbe 20 na 40 ụkwụ.
On November 20, 2015, na 2015 China Machinery Industry Science and Technology Award Emume e mere na Nanning. Akụkụ akụkụ MQH37A meriri ihe nrite nke atọ nke China Machinery Industry Science and Technology Award. A kpụpụrụ klọọkụ ụgbọ ala nke mbụ na-ebufe ụgbọ ala nke ọma na 2015. 38 ikike ikike, gụnyere ikike ikike 9 mepụtara ikike, ụdị ịba uru 28, na nhazi ọdịdị 1. Ihe oru ngo a “Ihe eji ebufe ihe na -ebugharị ihe na onye na -ebugharị ihe” nwetara ihe nrite ọla edo maka akwụkwọ ikike mepere emepe, na -egosipụta ike teknụzụ siri ike na asọmpi.
Shanghai Zhenhua Heavy Industry Group guzobere Streaming Machinery Division na 2016, na ngwaahịa ndị edoziri nke ọma ka amatala n'ụwa niile.
Zhenhua Heavy Industry eguzobela ngalaba ma ọ bụ ọfịs 27 dị na mba ofesi gburugburu ụwa. Ndị enyemaka ndị a gbanyere mkpọrọgwụ na mpaghara mpaghara, na-eme njikwa mpaghara, na-arụ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-arụ ọrụ mmezi ahịa mgbe ahịa gachara, yana mmepe ahịa.
Na June 15, 2017, Zhenhua Heavy Industry Port Machinery Group na Mediterenian Company bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta maka mbubata stacker, na -aka akara ahịa mbụ esenidụt nke ngwaahịa ngwaahịa ngwaahịa Zhenhua Heavy. Onye ọchụnta ego nke ụlọ ọrụ Mediterenian bụ ụlọ ọrụ Turkey Potunus, nke nwere mgbazinye bara ụba na arụmọrụ ahịa yana ahụmịhe mmezi n'ọhịa nke obere akụrụngwa akụrụngwa ọdụ ụgbọ mmiri dị ka iru stackers. Na mbido mbụ, ụlọ ọrụ ahụ zipụrụ ndị ọrụ aka ka ha gaa nyochaa ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị n'ọdụ ụgbọ mmiri Shanghai Port na ngwaahịa Zhenhua Heavy Industry na Nanhui, wee soro ndị na -ahụ maka teknụzụ Zhenhua Heavy Industry kwurịta okwu. E nyere ntule dị mma Zachua Heavy Industry ruru stacker. N'oge ahụ, ụlọ ọrụ a ga -agbazinye stacker a ga -ebuga n'ọdụ ụgbọ mmiri na ebe nchekwa nchekwa na Turkey na mpaghara ndị gbara ya gburugburu.
Na June 20, 2017, Zhenhua Heavy Industry na ụlọ ọrụ Novorossiysk NUTEP nke Russia bịanyere aka na kranes quay 3, cranes taya anọ, na 2 ZPMC ọhụrụ mepụtara.
Mmepụta na ọrịre nke Zhenhua Heavy Industry Reachstacker mụbara ihe karịrị otu narị na Ọgọst 16, "Daalụ maka inwe gị, na -aga n'okporo ụzọ" Zhenhua Heavy Industries 100 nkeji nke mmepụta stacker na nzukọ ahịa ka emere nke ọma. Ndị ahịa, ndị na -ebubata ngwaahịa, na ndị na -ekesa si n'akụkụ ụwa niile gbakọtara na ụlọ ọrụ dị na Shanghai Port Machinery Heavy. Onye isi ụlọ ọrụ Zhenhua Heavy Industry na osote odeakwụkwọ nke Kọmitii Party Huang Qingfeng, na osote onye isi ala Zhang Jian gara nzukọ mmepụta na ire ahịa. Ebe ọ bụ na ngwaahịa mbụ agbachapụrụ n'usoro mgbakọ na Ọgọstụ 2017, stacker nke Zhenhua Heavy Industry arụpụtala ihe karịrị 100 mmepụta na ire ahịa, na -emepe ahịa nkwanye ụlọ nke mba na mba, wee nweta otuto n'aka ndị ọrụ. A na -ere ngwaahịa igwe na -asọba ihe karịrị yaadị ọdụ 60 na mba 8 ma nwee aha ọma n'ahịa. Na nzukọ ahụ, ZPMC wepụtakwara njiri mara nke stacker na stacker nke ụlọ ọrụ ahụ, wee duzie mgbanwe teknụzụ na ZPMC ọhụrụ ahụ nwere stacker na stacker. Ndị sonyere gakwara na mpaghara mgbakọ na mpaghara ọrụ nke ngwaahịa igwe na -asọ asọ nke Shanghai Port Machinery, wee hụ arụmọrụ dị elu nke ngwaahịa igwe na -asọba nke ụlọ ọrụ ahụ. N'ahịa stacker na -erute, Zhenhua Heavy Industry bụ rookie na ụlọ ọrụ ahụ, ọ ga -aga n'ihu na -enye ndị ahịa ọrụ dị mma na ngwa ngwa yana ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ya na ngwaahịa dị elu.
E nyefere onye ọrụ ahụ crane nke mbụ ahaziri ahazi na China n'oge na -adịbeghị anya, enyere ndị ọrụ nke ọma ụlọ nrụpụta akụkụ mbụ MQH37AYT n'onwe ya nke ụlọ ọrụ mepụtara. Ọ gbanwere ihe na-ebuli ihe na-eburu ihe na ngwaọrụ nrụpụta ụgbọ ala ndị njem, wee nakwere teknụzụ yinye elu na nke ala, ntọala ụzọ ụzọ abụọ, na cylinder na-amị amị. Ọdịdị ọhụrụ na teknụzụ ọhụrụ, dị ka okirikiri nhọrọ ukwuu yiri ibe ya, mmechi nke mmụba na onye na -apụ apụ, enwetala otuto na nkwanye ugwu dị mma maka arụmọrụ ha dị mma na usoro nnwale nke ngwaahịa a.
E nyefere stackers atọ nke ọma na Weihai Port of Shandong Port Group N'April 9th, stackers atọ ruru Shanghai Port Machinery Heavy Industry Co., Ltd. n'okpuru Zhenhua Heavy Industry ka enyere nke ọma na Weihai Port of Shandong Port Group. Banyere otu stackers nwere ike iru, Zhenhua Heavy Industry emeela ka ọ dị mma maka ọdụ ụgbọ ala na-ebugharị, onyonyo panoramic 360 na nhazi ndị ọzọ metụtara ya. N'ime oge pụrụ iche, Zhenhua Heavy Industries, ka ọ na -arụ ezigbo ọrụ na mgbochi ọrịa, ndị ọrụ haziri ngwa ngwa ịmaliteghachi ọrụ wee malitekwa imepụta ihe, ma rụọ ọrụ dị mma na nrụpụta na nrụpụta akụrụngwa, n'ikpeazụ, rụchaa mbupu ya nke ọma. Dịka "ezigbo onye mmekọ" maka ngwa agha na mbugharị dị ka ọdụ ụgbọ mmiri, ụzọ ụgbọ oloko, na nnukwu ebu ibu, Zhenhua Heavy Industry's stackers dị mma, nwee ọgụgụ isi, nwee ntụsara ahụ, ịchekwa ike, yana ntụkwasị obi nke ukwuu, nchebe nke ukwuu, dị mfe ịrụ ọrụ, dị mfe Nlekọta, wdg Njirimara
Ngwa igwe na-asọba ZPMC batara n'ahịa Kambodia na nke mbụ Na Julaị 21, 2020, ebufere ngwongwo anọ na-enweghị ihe ọ bụla na-aga nke ọma na Sihanoukville, Cambodia, na-aka akara oge mbụ ngwaahịa ngwaahịa igwe na-asọba Zhenhua Heavy Industries abanyela n'ahịa Kambodia. Ọdụ ụgbọ mmiri Sihanoukville, nke a na -akpọ West Port, dị n'ụsọ oké osimiri ndịda ọdịda anyanwụ Cambodia. Ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri kacha ibu na Cambodia na naanị ọdụ ụgbọ mmiri azụmahịa ọgbara ọhụrụ, ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụghị ụgwọ yana ọnụ ụzọ azụmaahịa mba ofesi. Ihe akpa Zhenhua Heavy Industry ruru stackers na stackers nwere uru dị ukwuu dị ka arụmọrụ arụmọrụ dị elu, nchekwa na ntụkwasị obi, yana ngagharị siri ike. Ha enwetala ntụkwasị obi nke ndị ahịa ụlọ na ndị si mba ọzọ na usoro njikwa njikwa ha siri ike yana netwọ ọrụ ahịa ụlọ na mba ofesi siri ike.
Ọdụ ụgbọ mmiri Cambodia Sihanoukville rutere n'ọdụ ụgbọ mmiri site na iru nso nso a, akpa efu 4 ruru stackers nke Zhenhua Heavy Industry wuru maka Sihanoukville Port na Cambodia rutere n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ nke ọma. Ọdụ ụgbọ mmiri Sihanoukville, nke a na -akpọ West Port, dị n'ụsọ oké osimiri ndịda ọdịda anyanwụ Cambodia. Ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri kacha ibu na Cambodia na naanị ọdụ ụgbọ mmiri azụmahịa ọgbara ọhụrụ, ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụghị ụgwọ yana ọnụ ụzọ azụmaahịa mba ofesi. Ihe akpa Zhenhua Heavy Industry na -erute stackers na stackers nwere nnukwu uru dị ka arụmọrụ dị elu, nchekwa na ntụkwasị obi, yana ngagharị siri ike. Kemgbe ngwaahịa nke mbụ kwụsịrị n'ahịrị n'ọnwa Ọgọst 2017, ụlọ ọrụ ahụ erela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 200 rute stackers, nke a na -ere n'ebe dị anya. Ọtụtụ mba dịka Singapore na Cambodia.
Ngwaahịa usoro ZPMC Super Reachstacker tụgharịrị n'ahịrị mgbakọ otu otu na nso nso a, ewepula usoro usoro ZPMC Super Reachstacker n'ahịrị ọgbakọ otu na ibe, na -agbanye ike ọhụrụ n'ahịa igwe na -enuba. Stacker nke nwere ike iru nwere ike izute mkpa nnyefe dị elu nke ọdụ na yaadị dị iche iche, ma nwee ọgụgụ isi na nchekwa. Igwe ahụ dum na-ewepụta imewe nke ịdị nfe, ịdị arọ nke igwe ahụ niile bụ tọn 8 dị obere karịa ka ọkọlọtọ ọkọlọtọ dị na ụlọ ọrụ, nke nwere ike belata mmanụ ọkụ nke akụrụngwa, belata nrụgide wiil na ala, ma nwekwuo ọrụ. ndụ saịtị; Mgbanwe akpaka nke ụlọ ọrụ ahụ Nhazi wheelbase na -eme ka wheelbase na -agbanwe agbanwe nke nnukwu stacker rute mita 2.5, nke nwere ike rụọ ọrụ n'okpuru ọnọdụ ọrụ dị iche iche, na -ebelata oke ibu na radius nke akụrụngwa; a kwadebere ya na sistemụ nchịkwa elektrọnik nke ọgbọ nke atọ nke Zhenhua iji ghọta ọrụ onye na-agbasa, ọrụ njikọ njikọta atọ nke telescoping boom na boom tilting na-eme ka arụmọrụ ọrụ na izi ezi nke stacker rute dị ukwuu rụọ ọrụ nke ọma; nwere cylinder mejupụtara nwere ike rụọ "mgbake ume", chekwaa ike oriri, ma belata ọnụ ahịa ojiji. Na mgbakwunye, stacker super rute na -agbanwe agbanwe ma nwee ahụmịhe ịnya ụgbọ ala mara mma. Ọbụlagodi n'oge ihu igwe adịghị mma, ọ nwere ike ịchọpụta n'ụzọ doro anya ihe mgbochi na breeki na -akpaghị aka mgbe ọ na -atụgharị. Nhazi ime ụlọ ka ọ na -eme ka ọnọdụ ịnya ụgbọ ala dịkwuo mma. , Nchekwa. N'ọdịnihu, a ga-ejikwa igwe ojii IoT igwe ojii nke nwere ike iru, nke nwere ike ịrụ nleba anya ọnọdụ ụgbọ ala, nyocha arụmọrụ ike, na ndozi azụ ahịa iji nye ndị ahịa ọrụ zuru ezu na ebe yana melite akụrụngwa. arụmọrụ. N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ emepụtala ma ree ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 200 iru stackers na ihe karịrị stackers 40. Ọ banyela na Shanghai, Singapore, Qingdao, Guangzhou na nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ wee bupụ ya na mba ọzọ. Na mgbakwunye na stackers nke nwere ike iru, ngwaahịa igwe na -asọba Zhenhua ga -ejere ndị ọrụ ndị ọzọ ozi.